20 Strategies for Writing in Plain Language by Daw Tin Nwai Win - Myanmar Network
20 Strategies for Writing in Plain Language by Daw Tin Nwai Win
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on December 6, 2013 at 10:27 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
20 Strategies for Writing in Plain Language (ရိုးစင်းသော စာရေးသားနည်းလမ်း ၂၀)
ရိုးစင်းသော အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုရေးသားခြင်းမှာ ပိုမိုထင်ရှားလူကြိုက်များလာခြင်းနှင့် ရှင်းလင်းရိုးသားလွယ်ကူသော စကားပြေရေးသားသည့် အယူအဆသည် တရားဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများနှင့် အစိုးရလျှောက်လွှာပုံစံများတွင် လူအများပိုမိုလွယ်ကူစွာ သဘောပေါက်နားလည်စေရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဤစကားပြေအရေးအသားသည် အကြောင်းအရာအချက်အလက်များကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည်။ သတင်း နှင့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ဖော်ပြရန် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများသည် ရိုးစင်းသော အသုံးအနှုန်းကို အသုံးပြုရေးသားသင့်သည်။ စာပေရေးသားသူများသည် မည်သည့်အကြောင်းအရာမျိုးကိုမဆို ဤစကားပြေအရေးအသားကို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း စဉ်းစားသင့်သည်။ ရိုးရှင်းစွာ ရေးသားနည်း၏ အဓိက သဘောသဘာဝများမှာ -
၁။ သင်၏ စာပေကို ဖတ်ရှုသူများသည် မည်သူမည်ဝါများ ဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားဝေဖန်ပြီး ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိရန်လိုပါသည်။ ထိုသူများသည် မည်သူများဖြစ်သည်၊ စာပေဖတ်သားမှု အခြေအနေအဆင့်၊ မိမိရေးသားသည့် အကြောင်းအရာကို မည်မျှသိရှိထားပြီးဖြစ်သည်၊ မိမိကလည်း ထိုသူများကို မည့်သည်အကြောင်းအရာများကို သိစေလိုသည်၊ မိမိက သိစေလိုသော အကြောင်းအရာကို ဖတ်ရှုသူများ သိစေရန် မိမိက ဘာကို ရေးသားရန်လိုအပ်သည်ကိုလည်း သိရန်လိုပါသည်။
၂။ နိဒါန်းပျိုးသည့်အခါ မိမိရေးသားရာတွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို တင်ပြပါ။ ရေးသားရခြင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် စာဖတ်သူများအတွက်အဘယ်ကြောင့် ဤအချက်သည် အရေးကြီးကြောင်း သိရှိပါစေ။ စာဖတ်သူများသည် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို ဖတ်ပြီးသောအခါ ၎င်းတို့အား ဘာကို ပြုလုပ်စေသည်ကို စာရေးသူအနေဖြင့် စဉ်းစားပါ။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သင့်အရေးအသားကို စာဖတ်သူတို့က မည်သို့ အသုံးပြုရမည်ကိုလည်း စဉ်းစားရပါမည်။
၃။ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းပါ။ သို့မှသာ အကြောင်းအရာအချက်အလက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြရာ၌ အစီအစဉ်ကျနပြီး အချက်အလက်များသည် စာဖတ်သူများအတွက် အစီအစဉ် ကျနပေမည်။
၄။ စာဖတ်သူများ အချက်အလက်ဖြည့်တင်းပေးမည့် သူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် တာဝန်ယူရမည့် ကဏ္ဍများကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြပါ။
၅။ တင်ပြရာတွင် ဥပမာများ၊ ပုံပြင်များကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပါ။ အသုံးပြုမည့် ဥပမာများ၊ ပုံပြင်များကို စာရင်းပြုစု၍ ၎င်း၊ အဓိကကျမည့် အသုံးအနှုန်းများ၊ ရေးသားမှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို အလေးအနက်ပြုပြီး ရှုတ်ထွေးမှုမရှိဘဲ ရှင်းလင်းပြီး စံနစ်တကျပုံရိပ်ဖော်ထားသော အရေးအသားများကို အသုံးပြုပါ။
၆။ ဝါကျတိုများဖြင့် ရေးသားပါ။ "Subject" ဖြစ်ခြင်းပြ ကြိယာ၏ ကတ္တား၊ "verb" ကြိယာနှင့် "object" ကံပုဒ်တို့ကို ကပ်၍ ရေးသားပါ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဝါကျဖွဲ့စည်းရာတွင် "sequence" အစီအစဉ်မှာ (S+V+O) ဖြစ်ပါသည်။ စကားလုံးများကို ဂရုတစိုက် အစီအစဉ်ကျနစွာရေးဖွဲ့ပြီး "negative" ငြင်းဆိုခြင်းပြစကားကို ဝါကျတစ်ခုတည်းတွင် နှစ်ကြိမ်မသုံးမိရန်လည်း သတိပြုရပါမည်။ ဥပမာ "I don't want nothing." ဟု double negative ကို မသုံးရပါ။ "I don't want anything." ဟု negative ကို တစ်ကြိမ်တည်းသာ သုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၇။ စာပုဒ်တစ်ခုကို ရေးသားရာတွင် "topic" အကြောင်းအရာတစ်ခုကို "topic sentence" အဖွင့်ဝါကျဖြင့် စတင်ပါ။ Paragraph စာပုဒ်ကို တိုစေပြီး စာပုဒ် တစ်ခုမှတစ်သို့ ကူးပြောင်းရေးသားရာတွင် ချိတ်ဆက်မိပါစေ။ ထို paragraphs စာပုဒ်နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ပေးမည့် "transitional words/phrases" ကြားခံစကားလုံးကို သုံးပါ။ ဥပမာ "ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ" ကို ဖော်ပြသည်ဆိုပါစို့။ ပထမ စာပုဒ်တွင် ဆိုးကျိုး (၁)ကို ဖော်ပြပြီး၊ ဒုတိယစာပုဒ်တွင် ဆိုးကျိုး (၂)ကို ဖော်ပြလိုပါက "Next" ကဲ့သို့သော "transitional word" ကို သုံးရပါမည်။
၈။ စာဖတ်သူသို့ ရေးသားရာတွင် "second person pronoun" "You" ဖြင့် ရည်ညွှန်းရေးသားရပါမည်။ ဥပမာ "You must provide written proof." ဟု ရေးရပါမည်။ "We will respond within seven days." ကဲ့သို့သော ဝါကျတွင် "Active Voice" ကို သုံးရပါသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့သည် ၇ရက် အတွင်း တုန့်ပြန်မှုကို ပြုလုပ်မည့် သူများဖြစ်ပါသည်။ တုန့်ပြန်ခံရမည့် သူများမဟုတ်ပါ။)
Pronouns နာမ်စားများကို အနက်အဓိပ္ပါယ် အတိအကျဖွင့်ဆိုပါ။ သို့မှသာ စာဖတ်သူသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနိုင်ပေမည်။ First person "We", Second person "You", Third person "They" သည် audience စာဖတ်ပရိသတ်၊ သတင်းအချက်အလက်ပေးသူ စသည်ဖြင့် မည်သူ့အား ရည်ညွှန်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ရေးသားဖော်ပြရန်လိုပါသည်။
၉။ နာမ်များကို တသီတတန်းသွယ်တန်းရေးသားမှုမျိုးကို ရှောင်ပါ။ ဥပမာ "What, for example isacorporate-partner-strategic-marketing plan" ကဲ့သို့သော ဝါကျမျိုးတွင် "corporate-partner-strategic-marketing plan" သည် noun string ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရေးမည့်အစား "How about “a marketing plan that helps corporations we do business with understand our goals?” တွင် key word ဖြစ်သည့် marketing plan ကို relative clause (that helps corporations we do business with understanding our goals) ဖြင့် စကားပြေအရေးအသားကို သုံး၍ ရှင်းပြခြင်းသည် "plain language" ဖြင့် ရေးသားနည်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ "Shall" အစား "Must" ကို အသုံးပြုပါ။ ဥပမာ။ နမူနာပုံစံညွှန်ပြရန်လိုပုံကို "You must indicateasample." ဟု "must" ဖြင့် သုံးပါသည်။
၁၁။ "Verb" ကြိယာ အမြောက်အများသုံးခြင်းကို ရှောင်ပါ။ "We will makeadecision" အစား "We will decide" ဟုသုံးပါက သင့်တော်ပါသည်။
၁၂။ "Contractions" စကားလုံးများကို အတိုချုံးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ "Contractions" စကားလုံးများကို စကားပြောဆိုရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာ။ "They're" သည် "They are" ၏ contraction ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ ခန့်ညားသော စကားလုံးများသည် လန်းဆန်းတက်ကြွစေပါသော်လည်း စာဖတ်သူများသည် instructions ညွှန်ကြားချက်များနှင့် regulations စည်းကမ်းနည်းလမ်းများကို ဖတ်ရှုသည့်အခါ ရှုတ်ထွေးမှုဖြစ်ပေါ်စေပါသဖြင့် ရှောင်သင့်ပါသည်။ အလားတူသော စကားလုံးများကိုသာ သုံးသင့်ပါသည်။
၁၄။ စာဖတ်သူများက သိရှိသော "Technical Terms" နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သော အသုံးအနှုန်းများကို မသုံးဘဲမနေပါနှင့်။ သို့ရာတွင် "leverage" ဩဇာအရှိန်အဝါရှိသော စကားလုံးများနှင့် "legal terminology" တရားဝင်အသုံးအနှုန်းအခေါ်အဝေါ်များဖြစ်သော "asherewith" ကဲ့သို့သော "jargon" ဗန်းစကားများကို ရှောင်သင့်ပါသည်။
၁၅။ ဖြစ်နိုင်ပါက အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဖော်ပြရန် အမေးအဖြေပုံသဏ္ဍာန်ကို သုံးပါ။ မေးခွန်းမေးရာတွင် စကားပြောသည့် အသွင်ဖြင့် စာရှုသူများက မျှော်လင့်ထားမည့် မေးခွန်းမျိုးကို မေးပါ။ ထိုမေးခွန်းများကို ပြန်ဖြေရာတွင်လည်း ပြတ်သားတိကျသည့် အဖြေမျိုးဖြစ်ပါစေ။ ဖြစ်နိုင်ပါက အမေးအဖြေတစ်ခုစီသာ ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
၁၆။ "Conditional" ဖြစ်သည့် အခြေအနေအရ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရသော situations များတွင် "If clause" ကိုသော်၎င်း၊ future အနာဂတ်ကို ပြသည့် "will/shall + verb infinitive" သုံးခြင်းကို၎င်း၊ past အတိတ်ကို ပြဆိုသည့် "past tense" ကို သုံးမည့်အစား Present ပစ္စုပ္ပန်ကို ပြသည့် "present tense" ကို သုံးရပါသည်။
ဥပမာ "If conditional" သုံးရာတွင် "You can soon fileaclaim, if you were eligible during the stated period." ဟူသော ဝါကျတွင် "main clause" ကို "can soon file" ဟု "present tense" ကို သုံးထားပါသည်။ "Those who were eligible during the stated period" ဟူ၍ "past tense" ကို၎င်း၊ "will be given an opportunity to fileaclaim." ဟူ၍ "future tense" ကို၎င်း မသုံးပါ။
၁၇။ စာဖတ်သူကို အခြေခံ၍ မည်သည့် "acronym" ပုဒ်အသီးသီး၏အစ စကားလုံးဖြင့် အတိုကောက်ရေးနည်း ဥပမာ WHO = World Health Organization ဟု အတိုကောက်ရေးခြင်းဖြင့် "who" ဟု pronounce အသံထွက်ခြင်း၊ initialism ဥပမာ "the United Kingdom" ကို "the UK" ဟု ရေးသားခြင်းမျိုးကို၎င်း သင့်လျော်ရာကို ဆုံးဖြတ်၍ အသုံးပြုသင့်သည်။ "initialism" ကို သုံးပါက "abbreviation" အတိုကောက် www သည် "the World Wide Web" ကို ရည်ညွှန်းကြောင်းကို စာဖတ်ပရိသတ်များစွာနှင့် ရင်းနှီးပြီးဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရေးရာတွင် ပါဝင်သော "content" တွင် "acronym" နှင့် "initialism" အမြောက်အများသုံးခြင်းကို ရှောင်သင့်ပါသည်။
၁၈။ မလိုအပ်သော စကားလုံးများကို ချန်လှပ်ထားပါ။ "Verbose phrases" ခေါ် စကားလုံးများစွာ သုံး၍ ရှင်းလင်းနည်းများကို ရှာသုံးပါ။ ဥပမာ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြပြီးနောက် "or" သို့မဟုတ် "in other words" ဖြင့် ထိုပထမစာကြောင်းကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းရေးသားနည်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
"Basic နှင့် fundamental" တို့သည် "အခြေခံ" ဟူသော တူသော အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသဖြင့် "redundancy" ခေါ် စကားလုံးထပ်သည့် သဘောရှိသည့် "basic fundamental" ဟု အဓိပ္ပါယ်တူစကားလုံးနှစ်ခုကို ပူးတွဲအသုံးပြုခြင်းမျိုးကို ရှောင်ရပါမည်။ "doublets" ခေါ် "pair of similar things" ဥပမာ "cease and desist" ကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ်တူ စကားလုံးနှစ်လုံးကို တွဲ၍ သုံးခြင်းမျိုးကိုလည်း ရှောင်ရပါမည်။
၁၉။ ဖြစ်နိုင်ပါက definitions အနက်အဓိပ္ပါယ်များကို ဖွင့်ဆိုမှု၊ စာလုံးများစွာ သုံး၍ စကားလုံးများပြွတ်သိပ်နေမှုမျိုးကို ရှောင်ပါ။ သို့ပါသော်လည်း definition ကို အသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါက ၎င်းကို ဝေါဟာရ၏ ပထမဆုံးဖော်ပြသော "reference" ရည်ညွှန်းချက်အနီးတွင် ထားရှိရပါမည်။ Glossary ခက်ဆစ်အဘိဓာန်ကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရမည်ဆိုပါက ထိုခက်ဆစ်ဝေါဟာရများကို "letters of alphabet" အလိုက် dictionary တွင် စာလုံးများ စဉ်သကဲ့သို့ စဉ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလည်း လိုရင်းတိုရှင်းရေးသားရပါမည်။ ထိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် definition သည် context ၌ပါသော word စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြင့် တသမတ်တည်း ကိုက်ညီနေစေရန် သေချာစွာ ဂရုစိုက်ရပါမည်။
၂၀။ Links တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာ သုံးတတ်ရပါမည်။ "title of the web page" သည် " destination" ဖြစ်နေပါက title ကို link အဖြစ်သုံးပါ။ "website" ၏ အမည်၊ သို့မဟုတ်ပါက organisation အဖွဲ့အစည်းသည် ထို organisation ၏ website ကို ညွှန်ကြားရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ "click here" ကဲ့သို့ ယေဘူယျဆန်သော "wording" အသုံးအနှုန်းများကို ရှောင်ပါ။ "Links" များကို တတ်နိုင်သမျှ တိုပါစေ။ ရှာဖွေရန် လိုသော website ကို ရှင်းလင်းစွာ ညွှန်ပြပေးပါ။ ဝါကျတစ်ကြောင်းလုံးကို သုံးမည့်အစား စာလုံးများနှင့် စကားစုများကို သုံးခြင်းက ပို၍ အရာရောက်စေပါသည်။
အချိန်ဆွဲပုံများ (Delaying Strategies)
အင်္ဂလိပ်စကားပြော တိုးတက်လိုလျှင် ………
Permalink Reply by Thike Htun on December 13, 2013 at 12:28